Sida loo Delete Photos ka iPod xiriiri in Dufcaddii
> Resource > iPod > Sida loo Delete Photos ka iPod taabashada ee Marka
Ma rabtaa in aad ogaato sida ay u tirtirto sawiro ka iPod xiriiri mar marka aad leedahay aad u badan oo ku saabsan iPod taabto, sida iPod xiriiri 5? Iyada oo badan oo sawiro nuqul ku saabsan iPod taabto, aad rabto in aad tirtirto. Nasiib darro, Shirkadda Apple ee kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah wax ka bedel iyo tirtirto sawiro ku giringiriya Camera aad iPod xiriiri mid mid, ma tirtirto kuwa Photo Library ama albums abuuray keligaa.
Waa hagaag, in ay tirtirto photos off iPod taabto, waxaa idinku waajib ah inaad kala soo baxdo oo ay isticmaalaan qalab ah iPod u qaadidda sawir - TunesGo Wondershare (dadka isticmaala Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) (isticmaalayaasha Mac). Iyada oo ay caawimaad, waxaad awood u saareen aad iPod photos xiriiri in Dufcaddii mar. Tallaabooyinka labada qeybood oo waa kuwo fudud oo la mid ah. Just download version saxda ah sida ay xaaladdaada u gaar ah.
Sida loo sawiro ka iPod xiriiri in Dufcaddii saarto
Tallaabada 1. Connect iPod xiriiri PC iyo ordi barnaamijkan
Halkan, waxaan kaliya qaadan version daaqadaha sida tusaale. Si aad u billowdo leh, ordo this iPod qalab u qaadidda sawir ka dib markii ay ku rakibidda aad kombuutarka. Markaas, xiriiriyaan iPod xiriir PC via cable USB ah. Tani qalab u qaadidda sawir iPod ogaan doonaa iPod taabashada sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Waa in aad soo baxdo iyo rakibi Lugood aad kombuutarka hor inta aadan isticmaalin TunesGo Wondershare.
Tallaabada 2. photos Delete on iPod taabashada
Ka dib marka aad maamuli in aanu bilowno iPod qalab u qaadidda sawir, waxaa been geed buugga in ay leeg- bidix ah. Guji "Sawirro" in la furo dariishadaha maamulka sawirka.
Laba-guji Photo Library, Kitaabkii duudduubnaa oo Camera ama album kale. Dooro sawirrada aad dooneyso in aad tirtirto, ka dibna riix "Delete". Tani waxay u qaadidda sawir iPod bilaabi doonaan in ay soo saarto aad sawirrada aan loo baahnayn. Inta lagu guda jiro nidaamka dalka looga saarayo, waxaad lahaa si wanaagsan oo aan barkinta aad iPod taabto.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad horay u tirtiray, kuwaas oo sawiro la rabin aad iPod taabto. Hadda, dajiyaan files kale, sida heesaha, filimada iyo Podcast.
Waa wax sahlan in aad tirtirto sawiro badan si deg deg ah ku Library Photo oo albums kale ee aad iPod taabto iyadoo la kaashanayo barnaamijka. Ka sokow iPod taabto, barnaamijkan aad u saamaxaaya in ay baab'iyo sawiradiisii ​​on dhan iPhone iyo iPad, sida iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4s, iyo iPad mini.